Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Shirkada BECO oo Mugdigii ka saartay Magaalada Muqdisho
August 22 2017 00:53:16
Shirkada BECO oo Mugdigii ka saartay Magaalada Muqdisho
Shirkadda korontada ee BECO waxaa la aasaasay 5tii bishii May ee 2014. Waxa ay ka kooban tahay 3 shirkad oo mid kasta oo ka mid ah ay ka koobneyd shirkado yaryar oo isu tegay. Ujeeddada loo aasaasay ayaa waxa ay tahay in laga gudbo dhibaatooyin ballaaran oo dhanka korontada ah oo ka jiray magaalada Muqdisho, kuwaasoo haystay shirkadaha iyo macaamiishaba,si la isugu daro maamul, muruq iyo maskax, isla markaasna loo helo koronto tayeysan. Shirkada Beco waxay wadooyinka Muqdisho iyo daafaheeda ka surtay baalayaasha korontada ee shubka ah kuwaasi oo nabadgelyada korontada ku wanaagsan, qurux wadankana ka qeyb qaadanaya. Waxaa ay shirkadu adeegeeda oo awal ku ekaa Muqdisho geysay Gobolada kale ee Dalka, Sida Marko, Baraawe iyo daafaha magaalada Muqdisho oo horay uusan u joogin adeega shirkada, walina waxaa inoo qorsheysan in adeega korontada aan gaarsiino magaalooyinka kale ee wadanka. Qiimaha Korontada: Shirkada Beco waxay sameysay qiimo dhimis tan iyo markii ay shirkadu midoobeen, markii ugu dambeysay Bishii September 2016 Beco waxay qiimaha ka dhigtay :-
11 KW ilaa 1,000 KW $ 0.55
1,001 KW ilaa 5,000 KW $ 0.30
5,001 KW ilaa wixii ka badan $ 0.25
Wali shirkadu waxay ku tala jirtaa in qiimaha in macquul la gaarsiiyo.
Adeegyada Shirkada 100% korontada ay shirkaddu hadda bixiso waxaa dhaliya matoorro isticmaala naftada caadiga ah kuwaas oo lagu qaado xargo koronto meelaha qaarna ma gaarin dabkaasi in la sii marsiiyo dab XOOJIYAYAAL (Transformers), waana taas sababta hada wali korontada qiimaheeda u sareeyo.
Kaabayaashii korontada ee dalka oo awalba iskood u liitay waxey ku baab’een dagaalladii sokeeye ee dalka halkaas oo wixii ka dambeeyey aan fursad loo helin in wax horumarin ah lagu sameeyo sababo dhaqaale iyo aqoon awgeed. Tani waxaa ay keentay in shirkadda BECO aysan ka dhaxlin wax la taaban karo oo lagu socodsiiyo adeegga koronto oo ay xilkeeda qaadday sidaas awgeen waxaa lagama maarmaan noqotay in wax walba laga soo billaabo hoosta haddii ay noqon laheyd koronto dhalin, qaadis iyo qeybintaba. Shirkaddu waxey rakibtay dab dhaliyaal awood wax soo saar heer sare leh oo ku shaqeeya qorraxda oo awooddiisu dhan tahay 2.5MW, taasi oo qeyb ka aheyd hiigsigeenna adeegsiga quwadda dabiiciga.
· admin on April 08 2016 ·